के हो कृतज्ञता चुनौती ? कसरी गर्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : ११ मंसिर २०७८ ०७:२४
कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो कृतज्ञताको उत्सव मनाउन पनि बल लगाउने गरौँ । कसैलाई धन्यवाद दिएर कृतज्ञता व्यक्त गर्दा राम्रो महसुस हुन्छ । हामीले कृतज्ञता व्यक्त गर्न सिक्यौँ भने यसले जीवनमा खुसी र सन्तुष्टि बढाउँछ । त्यति मात्र नभई कृतज्ञ हुनुले डिप्रेसनको कारणलाई घटाउने पनि धेरै अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । यदि कृतज्ञताको अभ्यास गर्ने हो र यसबाट हुने फाइदालाई अनुभूति गर्ने हो भने दैनिक जीवनमा अरूप्रति कृतज्ञ रहने कोसिस गर्नुपर्छ ।
वैज्ञानिकले दैनिक रूपमा जति कृतज्ञ रहन सक्यो‚ त्यति नै फाइदा लिन सकिने पत्ता लगाएका छन् । कृतज्ञताले खुसी, राम्रो सम्बन्ध, आत्मसम्मान र सन्तुष्टि दिन्छ । कृतज्ञ रहनको लागि ५ दिनसम्म यी चुनौतीहरू स्वीकार गरेमा यसले केही कृतज्ञता अभ्यासमा ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।
पहिलो दिन ः आफ्नो ५ इन्द्रियमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुरु गर्नुहोस्
प्रायजसो मानिसहरू भौतिक चिजप्रति मात्र कृतज्ञता व्यक्त गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् । मानिसहरू आफूसँग भएको भौतिक वस्तु‚ जस्तैः कार, लुगा र फेन्सी सामग्रीहरू हुनुमा मात्र कृतज्ञता प्रकट गर्छन् । यदि आफूसँग यस्ता भौतिक वस्तुहरू छन् भने त्यसमा पनि खुसी नहुनु भन्ने होइन तर भौतिकवादलाई वास्तवमा जीवनको सन्तुष्टि कम गर्ने र कृतज्ञ महसुस गर्ने क्षमता कम गर्ने पाटोको रूपमा राखेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।
हाम्रो जीवनको सरल तर मूल्यवान् र गहिरो पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न हाम्रा ५ इन्द्रियमध्ये एकमाथि कृतज्ञता देखाएर चुनौतीलाई स्वीकार गर्न सक्छौ‚ जस्तैः दृष्टि । कुनै कागजमा आज मैले देखेको यी तीन चिजप्रति कृतज्ञ छु भनेर लेख्न सुरु गर्न सकिन्छ ।
ती तीन चिजहरू सामान्य पनि हुन सक्छन्‚ जस्तैः ऐनामा आफ्नो सुन्दर प्रतिबिम्ब देखेको, जीवनको थप एक सूर्यास्त, सडकमा छाडा हिँडिरहेको छिमेकीको कुकुर‚ जसलाई देखेर उद्धार गर्दा कुनै अप्रिय घटना हुनबाट बच्नु । हो‚ यसरी नै प्रत्येक साँझ ३ कारण लेख्न सकिन्छ‚ जसले आफ्ना ५ इन्द्रियमध्ये एकप्रति आभारी हुन अभ्यास गराउँछ ।
दोस्रो दिन ः आफूले लिएको प्रत्येक श्वासप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्
प्रत्येक श्वासमा कृतज्ञताको भावना राख्नुपर्छ । बिस्तारै फोक्सोमा श्वास भरिँदै जाँदा मस्तिष्कको आँखा पनि भरिँदै जान्छ । १० पटकसम्म यही प्रक्रिया दोहो¥याएपछि त्यो दिनका लागि इन्द्रियमा केन्द्रित भई कृतज्ञता गर्ने अभ्याससमेत गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा आफूले छोएको, महसुस गरेका तीन चिजप्रति कृतज्ञ छु भनेर लेख्न छुटाउनु हुँदैन ।
तेस्रो दिन ः कठिनाइलाई वरदानको रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्
चौथो दिन ः लिखित रूपमा अरूमाथि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्
पाँचौँ दिन ः ध्यान दिनुहोस् र साना कुराको प्रशंसा गर्नुहोस्
माथिका यी ५ कुराहरूलाई मात्रै ध्यानमा राख्ने हो भने र नियमित यसलाई अवलम्बन गर्ने हो भने यसले कृतज्ञता अभ्यासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । कृतज्ञ हुनु भनेको खुसी हुनु र सन्तुष्ट हुनु हो । यसले स्वास्थ्यमा समेत धेरै सकारात्मक असरहरू देखाउन थाल्छ । कृतज्ञता अभ्यासका यी ५ दिनले मात्र राम्रोसँग अनुभव गर्न सक्ने गरी सकारात्मक नतिजा दिन थाल्छ । त्यसैले कृतज्ञ रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् । मकालु खबर बाट सभार